Waaxda socdaalka oo u kordhisa intooda badan dadka la siiyo sharciga - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Waaxda socdaalka oo u kordhisa intooda badan dadka la siiyo sharciga
La daabacay torsdag 28 december 2017 kl 14.22
Intooda badan dadka codsada in loo sii dheereeyo sharciga deganaanshaha Sweden, ayay hay’adda socdaalku oggolaataa codsiyadooda sida uu muujinayo tirakoob cusub oo ay oo saartay.
Hayadda socdaalka ayaa waxaa soo gaaray sanadkan codsiyo gaaraya 17,000 oo ah dad doonaya in loo kordhiyo xilliga deganaanshahooda. Hay’adda socdaalka oo dhammesay howsha ilaa iyo toban kun ayaa 9 300 oo qof oo ka mid ah laga aqbalay codsiyadooda iyadoona loogu kordhiyay labo sano deganaanshiyahooda.
Qofka codsanaya in loo kordhiya deganaanshaha ee heysta shaqo uuna yahay qof dabooli kara noloshiisa, waxaa jirta fursad ah in uu helo sharciga deganaanshaha rasmiga ee aan lahayn wakhti xadidan.
Dadka heysta deganaanshaha ku meel gaarka ah ayaa waxaa ka mid ah qof aan ugu magac darnay Medhi kaasi oo sharciga deganaashihiisa uu dhacayo bisha Maarso ee sanadka soo socda. Inkastoo inta badan dadka loo kordhiyo sharciga, haddana Mehdi waa ay ku adag tahay in uu iska saaro shakiga in ay suuragal tahay in loo diido kordhinta sharciga uu haysto.
– Waa wax ii wanaagsan. Waan shaqeysan karaa oo wax baan baran karaa laakiin sidaasi oo ay tahay waxaan dareemyaa xasilooni la’aan oo habeenkii ma seexan karo waayo waxaan ka fekeraa waxa dhici kara haddii sharciga aan la ii cusbooneysiin.
Waxay ahayd bishi Luulyo ee sanadkii hore, markii uu dhaqan galay sharciga deganaanshaha ku meel gaarka ah. Sharciga ayaa ujeedkiisu ahaa in uu jiro muddo saddex sano ah taasi oo micnahiisu yahay in shaqsiyaadka loo aqoonsado qaxooti in la siiyo deganaansho saddex sano ah halka kuwa kale ee loo arko in ay u baahan yihiin magan-gelyo kalana la siiyo degnaansho saddex iyo toban bilood ah.
Mida uu helaba qofka sharci doonka, waxa uu helaya lambarka shaqsiga ee diiwaanka dalka kaasi oo siinaya xaquuqda uu leeyahay iyo waajibaadka isaga saaran ee ku noolashaha Sweden.
Tan iyo intii uu dhaqan galay sharciga xadidaya deganaanshaha, waxaa goor hore uu wakhtiga ka dhammaaday in badan oo sharciga heshay balse intooda badan dib ayey u codsadaan waana loo kordhiyay wakhtiga.
Veronika Linstarnd Kant oo ka tirsan saraakiisha sare ee hayadda socdaalka ayaa sheegtay in hay’addu ay aragto dad badan in ay weli u baahan yihiin magangelyo. Dadka intooda badan waxay ka yimaadeen dalka Suuriya oo xaalada dalkaasina weli ma aysan is bedelin oo weli waxaa ka jirta xaaladii ay ku heleen sharciga deganaanshaha, ayay tiri Veronika.
Medhi waxa uu ka dhacaya sharciga deganaansha dhowr bilood ka dib. Inkastoo dad badan oo la md ah laga aqbalay codsiyadooda, haddana Medhi weli kuma dhiirana in isagana sida dadka intooda badan oo kale looga aqbalo codsigiisa kordhinta sharciga.
Waa in aan codsiga gudbiyaa saddex bilood ka hor inta uusan dhicin. Wakhti badan iima harin, waxaan dareemayaa cadaadis. Dhabtii, ma aqaan waxa dhici doona, ayuu leeyahay Medhi.